Mundo Deportivo oo baahisay qorshaha ay Barcelona kula soo saxiixaneyso xiddig ka tirsan Chelsea – Gool FM
(Barcelona) 27 Jan 2021. Inkastoo kooxda kubadda cagta Barcelona ay la tacaaleyso xaalad dhaqaale oo aad u daran, misena waxay wali ku taammeysaa inay sameyso saxiixyo cusub marka la gaaro suuqa xagaaga.
Blaugrana ayaa dhexda ka taagan deyn/qaan 730 milyan oo euro ah, sidaas oo ay tahayne, waxay bartilmaameed ka dhiganaysaa xiddigo cusub oo ay dooneyso inayn safkeeda kusoo kordhiso.
Wasidaha Mundo Deportivo ayaa sheegaya in Barca ay xusul duub ugu jirto soo xero galinta xiddig baddel u noqon kara difaacooda Jordi Alba.
Xiddigan ayaa ku jira waayihiisa ugu dambeeyay ee Barcelona, waxaana kooxdu ay bartilmaameed ka dhiganeysaa laba xiddig oo ay u aragto inay buuxin karaan booskiisa.
Bartilmaameedka koowaad ee kooxda reer Spain waa difaaca naadiga Valencia ee Jose Gaya kaasoo lagu heli karo qiimo lacageed dhan 15 milan oo euro.
Waxaase sidoo kale qorshahooda ka mid ah laacibka Chelsea ka qiimaha beelay ee Marcos Alonso, kaasoo mustaqbalkiisa Stamford Bridge shaki badan la gelinayo.
Alonso ayaa lala xiriiriyay kooxaha ka ciyaara horyaalka Serie A, si la mid ah kooxo ka dhisan horyaalka La Liga ayuu bartilmaameed u ahaa, waxaase baacsigiisa kusoo biirtay Barcelona.
Si kastaba ha ahaate, naadiga Camp Nou ka dhisan ayaa geesta kale qorsheyneysa inay iska iibiso Junior Firpo kaasoo ku guuldarreystay inuu ka soo iftiimo safka Macallin Ronald Koeman iyo macallimiintii isaga ka horreeyay.